मन्त्री शर्मालाई सांसदको प्रश्न : आर्थिक सर्वेक्षणमा आएका तथ्याङक किन स्वेतपत्रमा राखेको ? - Arthatantra.com
मन्त्री शर्मालाई सांसदको प्रश्न : आर्थिक सर्वेक्षणमा आएका तथ्याङक किन स्वेतपत्रमा राखेको ?
काठमाडौं । सांसद सांसद कोमल वलीले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र धरापमा पर्दा अघिल्लो सरकारले धेरै राहतको कार्यक्रम ल्याएको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री शर्माले आर्थिक सर्वेक्षणमा भएका कुरा पेश गरेको जानकारी गराउभयो । ‘अघिल्लो सरकारले गरेको नराम्रो काम भन्नुभयो, तर तपाईको योजना खै के त ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद प्रकाश पन्तले आगामी दिनमा बजेट खोज्न रन्तपार्क, पुतलीसडकतिर खोज्न जान नपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले प्रतिनिधिसभा नहुँदा बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनु भन्दा पनि राष्ट्रिय सभाबाट ल्याउने बाताबरण बनाउन आग्रह गर्नु भएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माले सरकारले ल्याएको स्वेतपत्र पेश गर्नु भएको छ । उक्त स्वेतपत्रमा प्रश्न गर्दै सांसद खिमलाल भट्टराईले सरकारले पुर्वाग्रहीको पुलिन्दा पोखेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले वैदेशिक ऋण बिना सरकार अघि बढन सक्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ । उहाँले मन्त्री शर्मालाई सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन लागेको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।
सांसद खिमलाल देवकोटाले ओली सरकारले शिलान्यास गरेको ५, १० र १५ शैयाको अस्पताल के हुन्छ ? त्यसको स्रोत सुनिश्चिता छ की छैन भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ ।
सांसद रामनारायण बिडारीले कृषिमा वैदेशिक लगानी अघिल्लो सरकारले गरेको स्मरण गराउँदै अब आत्मनिर्भर बन्ने लगानी ल्याउने विषयमा, खोप, भेन्टिलेटरको लागि बजेट कति रहेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद भैरव सुन्दर अर्यालले सरकारले पूर्वाग्रही सोचले स्वेतपत्र ल्याएको बताउनुभयो ।
सांसद भगवती न्यौपानेले पुर्व सरकारले राम्रो केही पनि नगरेको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रीले तीलको बोराबाट कोदो छानेको भन्दै आफै सहभागी भएको सरकारले केही गरेन भनेर कसरी भन्नु भएको ? भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ ।
सांसद बिमला राई पौडेलले भूकम्पदेखी कोरोनासम्म कुरा स्वेतपत्रमा रहेको भन्दै भारतले गरेको लकडाउनको कुरा किन छुटाएको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।
वि.सं.२०७८ साउन २८ बिहीवार १३:०० मा प्रकाशित
अघिल्लाे अघिल्लो सरकारले ल्याएका महत्वपूर्ण योजना हटाउँदैनौ, सरकारको योजना आगामी दिनमा पेश गरौला : मन्त्री शर्मा
पछिल्लाे महालक्ष्मी लाइफको ‘महालक्ष्मी बाल बचत बीमा योजना’ सार्वजनिक, कस्ता छन् सुविधा ?